एमालेको समानुपातिक उम्मेदवार सार्वजनिक (सूचीसहित) « Naya Page
एमालेको समानुपातिक उम्मेदवार सार्वजनिक (सूचीसहित)
काठमाडौं : नेकपा एमालेले समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारी सार्वजानिक गरेका छन् । एमालले समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वारमा नयाँ अनुहारलाई प्राथमिकता दिएको छ । समानुपातिकको पहिलो नम्बरमा तेह्रथुमका विजय सुब्बा रहेका छन् ।
उनी प्रतिनिधिसभाका ११० जनाको समानुापतिक निर्वाचन प्रणालीमा हुने बन्द सुचीमा पहिलो नम्बरमा परेका हुन् । सुब्बाकी बहिनी डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे पनि समानुपातिक सुचीमा परेकी छिन् । एमालेले समानुपातिक उम्मेद्वारमा अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष नविना लामा, नेता केशवलाल श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, पुष्प कँडेललगायत परेका छन् ।
हेर्नुहोस् एमालेका समानुपातिक उम्मेदवार सूची
उनी प्रतिनिधिसभाका ११० जनाको समानुापतिक निर्वाचन प्रणालीमा हुने बन्द सुचीमा पहिलो नम्बरमा परेका हुन् । सुब्बाकी बहिनी डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे पनि समानुपातिक सुचीमा परेकी छिन् ।
एमालेले समानुपातिक उम्मेद्वारमा अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष नविना लामा, नेता केशवलाल श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, पुष्प कँडेललगायत परेका छन् ।
प्रकाशमान, शशांक र विमलेन्द्रबीच भेटवार्ता, सात विषयमा समझदारी